Vanhu Vokurudzirwa Kuongororwa Maziso Vasati Vaita Mapofu
Vamwe vanachiremba vari kukurudzira vanhu kuti vapote vachinoongororwa maziso kuti vasazoguma vaita mapofu nekuti zvirwere zvinenge zvakomba.
VaSendiso Ndlovu, avo vanoshanda nesangano reSAYWHAT vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mokunge vatopedza kuita dhigiri reengineering paUniversity of Zimbabwe.
VaNdlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr Solomon Guramatunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudhiraivha mota kana kufamba vega.
VaNdlovu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusoro soro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV/Aids.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvezvehutano Dr Josephat Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvokuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapike.
Dr Chiripanyanga vakatsangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu zvinonzi Glaucoma neTrachoma.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano, vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi rehutano, Dr Justice Mudavanhu, vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze hutano hwemaziso zvakanaka nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvizvirwere zvemaziso zvakasiyana siyana.
Dr Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu, 60 000, vakamirira kuti vabviswe tsanga dzemumaziso zvokuti varikuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi chimbi.
Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East, ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi Trachoma zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupa pachena vagari vemunzvimbo idzi, mishonga yokudira mumaziso avo iri nzira yokuchidzivirira hubofu.
Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sightsavers yakaburitsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa hupofu munyika uye kuti chirwere cheTrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika.
Dr Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawandisa vanoda magirazi okuonesa zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakiriniki anosanganisira Sekuru Kaguvi iri paParirenyatwa Hospital, Norton Eye Hospital, Sakubva Clinic kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasipasi.